OBS Studio 26.1 inouya neiyo chaiyo kamera rutsigiro, OpenBSD uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeOBS Studio 26.1 ichangobva kuziviswa, vhezheni iyo inomira pakuwedzera chaiyo kamera rutsigiro kune ese MacOS neLinux, pamwe nerutsigiro rweOpenBSD, gadziriso, uye nezvimwe.
1 Main nyowani maficha eBBS Studio 26.1
2 / Maitiro ekuisa OBS Studio 26.1 pane linux?
2.1 Kuisa OBS Studio 26.1 kubva Flatpak
2.2 Kuisa OBS Studio 26.1 kubva kuSnap
2.3 Kuisirwa kubva kuPPA (Ubuntu uye zvigadzirwa)
2.4 Arch Linux uye zvigadzirwa
Main nyowani maficha eBBS Studio 26.1
Pane shanduko huru dzinomira mushanduro iyi nyowani yesoftware, imwe yeakanyanya kukosha ndeye el chaiyo kamera rutsigiro iyo yave kuwanikwa yeLinux uye macOS, kubvumira OBS kuburitsa kuti ishandiswe sewebhu webcam kune zvimwe zvinoshandiswa pakombuta.
Zvakakosha kufunga nezve izvo yeLinux, iwe unofanirwa kuve iine v4l2loopback-dkms package yakaiswa kuti iyo kamera chaiyo ishande.
Chimwe chitsva icho chinoratidzwa ndechekuti iwesar vhidhiyo pane zvinodiwa (VOD) kana uchishandisa Twitch, pamwe nekugona kwekushandisa yakasarudzika odhiyo track yakawedzerwa. Kana ukashandisa iri nyore kuburitsa maitiro, "Gonesa epamberi encoder marongero" uye "Twitch VOD Track (shandisa track 2)" inofanira kushandiswa. Iyo Twitch VOD inobuda ichave iri odhiyo track.
Kune rimwe divi, tWakawedzera rutsigiro rweiyo OpenBSD chikuva inoratidzwawo (Kunyangwe iyi rutsigiro ichiri kutariswa mune yekutanga nhanho).
Nezve kuvandudzwa kweLinux, tinogona kuzviwana chirongwa ichi chave kuzoona zvimwe zviitiko zviri kushanda izvozvi uye inoyambira mushandisi nezve kumhanyisa anopfuura kopi imwe panguva. Uye izvo paunenge uchigadzira chimiro chitsva, iwe zvino uchazopihwa sarudzo yekumhanyisa otomatiki ekugadzirisa wizard.
Uyewo, yakachinja "Nyorera Yekushambadzira Service Bitrate" kuenda ku "Regedza Kutenderera Sevhisi Kugadziridza Kurudziro", yakaendeswa kuchikamu cheKutenderera kwehwindo.
Of the dzimwe shanduko dzinomira pachena yeiyi vhezheni itsva:
Wakawedzera "Decklink Subtitles" chinhu kuMidziyo menyu kuti uwane mazita kubva kuDeclink michina.
Wakawedzera kugona kwekuti Hardware ikurumidze animated shanduko mhedzisiro.
Wakawedzera sarudzo yekudzokorora mafirita kubva kumenu yemamiriro.
Wakawedzera kugona kushandisa clipboard kufambisa firita pakati pezvinyorwa.
Wakawedzera HLS (HTTP Live Streaming) rutsigiro rweYouTube.
Wakawedzera replay buffer chengetedza chiitiko kune iyo interface API
/ Maitiro ekuisa OBS Studio 26.1 pane linux?
Kuisa OBS Studio 26.1 kubva Flatpak
Kuisa OBS Studio 26.1 kubva kuSnap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OBS Studio 26.1 inosvika ine chaiyo kamera rutsigiro, OpenBSD uye nezvimwe